Kedu ihe egwurugwu ọkụ na otu esi kpụrụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị amataworị na ọdịdị bụ ihe ịtụnanya ma nwee ike igosi anyị ihe ịtụnanya pụrụ iche na ihe omume ji oke mma. N’okwu a, anyị na-ekwu maka ihe mberede na-eme na ikuku nke akpọrọ egwurugwu oku. Ọ bụ ezie na aha a dịtụ ntakịrị site na ihe ọ na-egosi n'ezie, ọ bụ ihe ịtụnanya na omume metụtara na mbara igwe na nke na -emepụta ọmarịcha mosaics. A makwaara ya site na aha nke arches-horizon arches. Ọ bụ aha yiri ya karịa ka ọ na-egosipụta. Ihe mosaics ha mebere di nma. Agbanyeghị, ajụjụ a na-ajụ karịa otu bụ, kedụ ka esi akpụpụta ha na gịnị kpatara ya?
Ọfọn, ke ibuotikọ emi anyị na-aga ịkọwa ihe nzuzo niile nke egwurugwu ọkụ. Anyị ga-akọwa otú e si kpụọ ya na ihe kpatara ya.
2 Ihe kpatara egwurugwu ọkụ
3 Ọdịdị nke cirrus ojii
4 Ebee ka ị nwere ike ịhụ egwurugwu ọkụ
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe dị ka egwurugwu nkịtị, ọ bụghị ihe yiri ya na ihe mere e jiri guzobe ya ma ọ bụ na mmalite ya. O nwere ike ịbụ na, na ndụ gị niile, ị hụla ya karịa otu oge. Ha bụ ụtarị dị iche iche nke agba dị iche iche ma yie nke nke egwurugwu. A na-arụ ọrụ agba ndị a n'ihi ìhè nke igwe ojii na-ebunye cirrus ojii. Nke a na - akpata ụdị agba agba gburugburu amalgam chromatic nke edechara site na igwe ojii.
Ọ bụrụ na ị na-ejikwa nlezianya na-ahụ ihe ngosi a ma na-ese ya, ọ ga-enye gị foto ka mma karịa egwurugwu ọdịnala. Agbanyeghị na enweghị otu ihe kpatara eji guzobe ma ọ bụ na ọ dị ka ezigbo egwurugwu, A na-akpọ ya egwurugwu ọkụ n'ihi na ọ na-adị n'oge ụbọchị akọrọ. Na mgbakwunye, ọ yiri nke mejupụtara agba na ịdị n’ụbọchị ọkọchị. Nanị ihe ọ na-eme bụ na ọ dịghị mkpa mmiri ozuzo ịpụta. Mmetụta na ọdịdị ha nwere bụ nke ọkụ na-enwu ọkụ nke a pụrụ ịhụ na mbara igwe nke ikuku.
Ihe kpatara egwurugwu ọkụ
Anyị ga-akọwa nke ọ bụla site na nzọụkwụ ihe kpatara ya na ihe kpatara eke na egwurugwu ọkụ. Ngwurugwu ndị a na-atụgharị anya nwere usoro ọmụmụ ha n'ihi ígwé ojii cirrus. Halos bụ ihe a na-ahụkarị na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị ma na-eme ihe ngosi mara mma na mbara igwe anyị. Ha bụ okirikiri nke nwere agba dị iche iche oge ụfọdụ ma na-agba anyanwụ ma ọ bụ ọnwa gburugburu ụfọdụ. N'oge ndị a, a ga-ahụ ha na okpueze na-ahụ anya nke ime ya dị ọchịchịrị karịa elu igwe gbara ya gburugburu. Halos a na-etolite site na egwuregwu dị iche iche nke ọkụ n'ime ihe na-eme na okike.
Ọfọn, mgbe anyị na-agbakwunye agba nke egwurugwu na agba agba nkịtị ma wepụ mmetụta nhụjuanya nke anyanwụ ma ọ bụ ọnwa nwere, Anyị nwere ike ịnwe arc-kwụ ọtọ ma ọ bụ mara amara dị ka egwurugwu ọkụ. Enwere ike ihu ihe ngosi a n’enweghi nsogbu oge niile ebe ọ bụ na anyanwụ adịghị n’ebe ahụ ka ị ghara ile ya anya ozugbo. Anyị maara na ile anwụ ma ọ bụ gburugburu gị anya ogologo oge nwere ike bụrụ ihe na-emebi retinas anyị. Enwere ikpe nke ndị kpuru ìsì site na ile anya na anyanwụ ogologo oge.
Nke a warara nke otutu agba na-guzobere na elu na anyị kwesịrị ụfọdụ kpamkpam-apụghị ịgbanahụ agbanahụ ọnọdụ. Otu ihe bụ na, anyanwụ kwesịrị ịdị ihe dịka nrịgo 58 site na eriri igwe. Anyị chọrọ ezigbo ego nke igwe ojii cirrus na mbara igwe nke nwere ike ịgbasa ọkụ. Igwe ojii a dị ihe dị ka kilomita 8 n’ogologo ma pụta n’ahịrị ogologo, dị warara. N'ihi igwe ojii ndị a, a na-eme mbara ala na-acha ọcha na ntanetị na-acha anụnụ anụnụ siri ike. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye agba nke egwurugwu na mbara ala a mara mma, anyị ga-enwe ihe dị ịtụnanya.
Ọdịdị nke cirrus ojii
Iji kọwaa ihe dị iche na egwurugwu egwurugwu na egwurugwu ọkụ, okike nke igwe ojii cirrus bu isi. Ọ bụ ezie na ihe izizi bụ nsonazụ nke ìhè anyanwụ na mmiri ozuzo ndị ka na-akwụsịtụ na ikuku, arc-kwụ arcs chọrọ ihu igwe akọrọ. Nke a nke ihu igwe akọrọ bụ n'ihi na ọ dị mkpa maka obere obere ice ice hexagonal zoro ezo na igwe ojii cirrus. N'ihi ya, odi nkpa ima udi na udiri igwe oji a.
Ọ bụ ekele maka ọdịdị nke obere kristal a na-acha uhie uhie na-acha anyanwụ nwere ike igosipụta ma gbasaa site na igwe ojii cirrus, na-akpụ agba agba ogologo. Mgbe ụfọdụ, arcs ndị a dị ogologo nke na ha nwere ike ịgbatị site na mbara igwe niile nke ọnọdụ anyị. Nkuzi ahụ dị ezigbo iche ma bụrụkwa ihe pụrụ iche maka ihe ndị a. N'ihe niile anyị kwuru, anyị ga-etinyekwu otu ihe. Ọ bụ na akpụrụ mmiri ice ga-adịrịrị nso na ntanetị maka njikọ nke ụzarị anyanwụ. Ma ọ bụghị, enweghi uzo iji gbasaa ihie a site na igwe ojii.
Nke a pụtara na, imirikiti oge anyị na-ahụ egwurugwu ọkụ, oge ya dị mkpụmkpụ. Ọnọdụ ndị a na-achọ ihe ga-adịru nwa oge. Anyanwụ na-aga ịda ma akụkụ ya na kristal ice adịghịzi ka ịtụgharị ya.
Ebee ka ị nwere ike ịhụ egwurugwu ọkụ
Ugbu a anyị tụlechara ọzụzụ na ihe kpatara ya, anyị ga-akọwa ebe akụkụ ụwa na mgbe ha na-agakarị karịa. Iji hụ ya, ịchọrọ ebe nwere ihu igwe akọrọ na ebe anyanwụ dị ogo 58 ma ọ bụ n'okpuru. Ọ bụrụ n ’ịga mba Nordic, ị gaghị ahụcha otu n’ime ndị a n’ịma mma ya.
Otu n'ime obodo kachasị mma iji hụ nke a bụ Mexico City ma ọ bụ Houston. Na Spain anyị nwere akụkọ ọjọọ, anyị tere aka ugwu ịhụ ya.
Enwere m olileanya na ozi a na-eje ozi iji mụtakwuo banyere egwurugwu ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ogwurugwu ọkụ